Programming Languages - Myanmar BOC
Programming Languages ကို Myanmar ဘာသာဖြင့် လေ့လာလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံး Videos များကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
Spring Programming Language
Spring Programming Language ကို Myanmar ဘာသာဖြင့် လေ့လာနိုင်ရန် Teacher Min Lwin မှသင်ကြားပေးသော အကောင်းဆုံး Tutorial Videos များကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။
Teacher Post Admin
Android Development (Kotlin)
Kotlin Android Development tutorial ကို စိတ်ဝင်စာသူများအတွက် မြန်မာဘာသာဖြင့် လွယ်ကူစွာသင်ကြားနိုင်အောင်တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ Related Course: Kotlin Programming – https://myanmarboc.com/course/kotlin-programming-language/ # MyanmarBOC || Myanmar Best Online Course
Teacher Waifer Kolar
Kotlin Programming ကို စိတ်ဝင်စာသူများလေ့လာနိုင်ရန် အကောင်းဆုံး သင်ခန်စားများကို MyanmarBOC မှာ တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ # MyanmarBOC || Myanmar Best Online Course
March 2, 2020 / 1 Comment
Java Android Development ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် အကောင်းဆုံး Tutorial Lessons များဖြင့် မိတ်ဆွေတို့ လွယ်ကူးစွာ လေ့လာနိုင်စေရန် MyanmarBOC မှစုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
January 28, 2020 /4Comments
Git for version control ကိုကောင်းစွာကျွမ်းကျင်အသုံးပြုနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ Myanmar BOCမှ စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။ Gitကို version controlပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့် project အသေးကစ Projectအကြီးကြီးထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်းညာဘက်အောက်ထောင့်က Chat headလေးကိုနှိပ်၍ တိုက်ရိုက်(Live Chat)ဖြင့်လာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ သင်ကြားရတာ အဆင်ပြေရင်လည်း ⭐⭐⭐⭐⭐ ကြယ်ငါးပွင့် ပေးကာ Reviewပြုလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် See More- other courses Like and Follow- Myanmar Web Store
Teacher Sithu Paing
Java OOP programming Language ကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာဖို့ Self-Studyလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် သင်ကြားထားပါတယ်ဗျ။ အဆင်မပြေတာရှိရင်လည်း ညာဘက်အောက်ထောင့်က chat Headလေးကို နှိပ်၍တိုက်ရိုက် live chatဖြင့်လာရောက်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ် သင်ခန်းစာများကို ကြယ်ပွင့်လေးများဖြင့် Reviewပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော် See other Related Courses- Click Here Like and Follow our Facebook- Myanmar Web Store
January 15, 2020 /6Comments
MySQL Database Tutorial What is MySQL Database? MySQL (/ˌmaɪˌɛsˌkjuːˈɛl/ “My S-Q-L”) is an open-source relational database management system (RDBMS). Its name isacombination of “My”, the name of co-founder Michael Widenius’s daughter, and “SQL”, the abbreviation for Structured Query Language. Database ဆိုတာကတော့ ဒေတာများကိုစနစ်တကျစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာဒေတာဘေ့စ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသောအချက်အလက်များထပ်မံထည့်သွင်းရန်၊ MySQL ဆာဗာကဲ့သို့သောဒေတာဘေ့စ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်လိုအပ်သည်။ ကွန်ပျူတာများသည်အချက်အလက်အမြောက်အများကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်ဒေတာဘေ့စ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များသည်ကွန်ပျူတာအတွက်သီးခြားအသုံးအဆောင်များသို့မဟုတ်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များ၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့် MySQL Database သင်ခန်စားကို အခမဲ့ ‌‌လေ့လာနိုင်ရန် အကောင်းဆုံး…
November 21, 2019 /4Comments
October 18, 2019 /6Comments
WordPress Tutorial Myanmar WordPress ကိုအသုံးပြု၍ ကိုယ်ပိုင် free Domain ကိုယ်ပိုင် Free Hosting များဖြင့် Website တစ်ခုဖြစ်လာသည်ထိ သင်ကြားပေးထားပါသည် ဒီသင်ခန်းစာတွင် WordPress ကို ကိုယ့်ရဲ local Computer ထည့်မှာဘယ်လို Setup လုပ်မှာလဲ? ပြီတော့ WordPress အခြေခံအသုံးပြုနည်း ( ကိုယ်ပိုင်Free D0mainName, Free Hosting, Theme Installation, Plugin Installation, Them editing, Menu Creation and editing, word press widget etc..) စသည်တို့ကို Tutorial Video များဖြင့် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြသထားပါသည်။ WordPress ကို အခုမှ လေ့လာသူများအတွက်…
Teacher Myat Min Lu